United Airlines dia mitatitra ny zava-bitan'ny Quarter faharoa 2017
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » United Airlines dia mitatitra ny zava-bitan'ny Quarter faharoa 2017
United Airlines (UAL) dia nanambara androany ny valim-bola ara-bola amin'ny telovolana faharoa.
• UAL dia nitatitra ny fidiram-bola amin'ny telovolana 818 tapitrisa dolara, nidina ny karama isaky ny anjaran'ny $ 2.66, ny vola naloa talohan'ny hetra 1.3 miliara dolara ary ny sisin'ny hetra 12.7 isan-jato.
• Tsy misy fiampangana manokana, UAL dia nitatitra ny fidiram-bola amin'ny telovolana faharoa $ 846 tapitrisa, nampihena ny vola azo isaky ny anjarany $ 2.75, ny vola azo alohan'ny hetra 1.3 miliara dolara ary ny sisin'ny hetra 13.2 isan-jato.
• Ny vola miditra isaky ny telovolana ampaham-bidy dia nitombo efa ho 50 isan-taona isan-taona; ankoatry ny fiampangana manokana, ny vola miditra isaky ny telovolana nisondrotra tamin'ny telovolana dia nitombo 5 isan-jato isan-taona.
• Natolotra ny laharam-pahamehana fiaramanidina ambony eo amin'ireo mpifaninana lehibe, ao anatin'izany ny fahavitana tsara indrindra, ny fahatongavany ara-potoana ary ny fahombiazan'ny fiaingana amin'ny telovolana faharoa.
Oscar Munoz, tale jeneralin'ny United Airlines, dia nilaza fa, "Ny zava-bita ara-bola sy ara-bola tsara tamin'ity telovolana lasa teo ity dia maneho fa eo amin'ny lala-mahitsy i United. Avy amin'ny fampiasam-bola amin'ny vokatra sy ny olonay, mampitombo ny fifantohanay amin'ny traikefan'ny mpanjifa, manidy ny elanelana misy amin'ireo mpiara-miasa aminay ary manome valiny matanjaka amin'ireo mpamatsy vola anay, dia nanao fandrosoana lehibe izahay ary nandroso tamin'ny fomba hentitra i United. Tsy misy telovolana tokana na fironana ary mbola mila mandeha lavitra kokoa isika alohan'ny hahatsapantsika tanteraka ny mety ho an'ity zotram-piaramanidina ity ary mihoatra ny andrasan'ny mpanjifanay. Saingy, fantatray ihany koa fa ny fahombiazana iray dia miteraka fahombiazana iray hafa ary ny fahombiazan'ny asa ara-bola sy ara-bola naorinay tamin'ity telovolana ity dia manampy amin'ny vanim-potoana izay tapa-kevitra isika rehetra eto United hivoatra. ”
Vola miditra amin'ny telovolana faharoa
Ho an'ny telovolana faharoa 2017, 10.0 miliara dolara ny vola miditra, fitomboan'ny $ 604 tapitrisa na 6.4 isan-jato isan-taona. Ny fidiram-bola ho an'ny mpandeha voaangona isaky ny telovolana 2017 dia miakatra 2.1 isan-jato ary nitombo 2.0 isan-jato ny vokatra natambatra raha oharina amin'ny telovolana faharoa 2016. Ny karama kargany dia $ 254 tapitrisa tamin'ny telovolana faharoa 2017, fiakarana 22.1 isan-jato taona -mihoatra ny taona noho ny habetsaky ny avo kokoa manerana ny rafitra.
Scott Kirby, filohan'ny United Airlines, dia nilaza fa, "Ny fahombiazan'ny telovolana faharoa dia niavaka tamin'ny lafiny ara-bola sy ara-piasana. Tena mirehareha izahay fa ny ekipan'i United dia nanolotra ny fahombiazan'ny asa tsara indrindra teo amin'ireo mpifaninana lehibe nandritra ny iray amin'ireo toerana be mpampiasa indrindra. Ity fampisehoana fanao isaky ny telovolana ity dia nahavita hatramin'ny tapaky ny taona. ”
Karama amin'ny telovolana faharoa
Ny vola lany amin'ny asa dia $ 8.6 miliara tamin'ny telovolana faharoa, tafakatra 3.2 isan-jato isan-taona. Tsy misy fiampangana manokana, ny vola lany amin'ny fandidiana dia $ 8.6 miliara, fiakarana 8.3 isan-jato isan-taona. Ny vidin'ny singa mitambatra isaky ny kilometatra azo alaina (CASM) dia nihena 1.0 isan-jato raha oharina amin'ny telovolana faharoa 2016 noho ny fihenan'ny fiampangana manokana amin'ny 2017, ampitahaina amin'ny fandaniana amin'ny asa sy solika avo kokoa. Ny CASM nanamafy tamin'ny telovolana faharoa, tsy misy sarany manokana, fandaniam-bolan'ny antoko fahatelo, fizarana solika sy tombom-barotra, nitombo 3.1 isan-jato isan-taona, atosiky ny karaman'ny mpiasa ambony kokoa.
Ranon-javatra sy fizarana kapital
UAL dia namorona $ 1.6 miliara amin'ny fikorianan'ny vola ary namarana ny telovolana tamin'ny $ 6.6 miliara amin'ny vola azo terena tsy voafetra, ao anatin'izany ny fanoloran-tena $ 2.0 miliara eo ambanin'ny toerana anaovany trosa. Ny vola lany amin'ny kapitalin'ny orinasa dia $ 1.1 miliara amin'ny telovolana faharoa. Anisan'izany ny fananana azo tamin'ny alàlan'ny famoahana trosa sy famatsiam-bola amin'ny fananganana seranam-piaramanidina ary tsy manilika ireo tetikasa azo averina tanteraka, ny orinasa dia namoaka $ 1.2 miliara nandritra ny telovolana faharoa tamin'ny fandaniam-bola namboarina. Ny fividianana vola maimaim-poana, refesina amin'ny fikorianan'ny vola tsy mampihena ny fandaniana amin'ny renivohitra, dia $ 314 tapitrisa ho an'ny telovolana faharoa. 160 tapitrisa dolara ny vola natolotry ny orinasa tamin'ny volan'ny fisotroan-dronono ary nandoa 238 tapitrisa dolara tamin'ny trosa indroa ny trosa tamin'ny telovolana faharoa. Tamin'ny telovolana dia nividy 0.4 miliara dolara amerikana ny UAL tamin'ny vidiny $ 74.39 isaky ny anjara. Tamin'ny 30 Jona 2017, 1.1 miliara dolara eo ho eo sisa ny orinasa hividianana anjara amin'ny alàlan'ny fahefany mividy indray.
Ho an'ireo 12 volana nifarana tamin'ny 30 Jona 2017, ny vola miditra talohan'ny hetra aloan'ny orinasa dia 3.8 miliara dolara ary 17.0 isan-jato ny fiverenana amin'ny renivola nampidirina.
Andrew Levy, filoha lefitra mpanatanteraka ary lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola ao amin'ny United Airlines, dia nilaza hoe: "Manatanteraka ny fanoloran-tenanay ho an'ireo tompon-trano izahay. Ny zava-bitanay sy ny fitomboan'ny vola azontsika isaky ny telovolana dia mampiseho fa mizotra amin'ny lalana marina isika. Manantena izahay fa ny taha mialoha ny hetra amin'ny telovolana fahatelo dia eo anelanelan'ny 12.5 sy 14.5 isan-jato. ”
Fanavaozana ny armada
Tamin'ny telovolana faharoa, UAL dia nanatitra fiaramanidina enina Boeing 777-300ER, fiaramanidina Airbus A319 iray nampiasaina ary fiaramanidina Embraer E175 folo. Nanambara i UAL fa handray fiaramanidina efatra fanampiny Boeing 777-300ER amin'ny taona 2018. Ny fiaramanidina 777-300ER dia manasongadina sokajy orinasa United Polaris vaovao an'ny orinasa, miaraka amina seza natokana ho an'i Etazonia ary kitam-pitaovana vaovao. Ho fanampin'izay, nividy fiaramanidina Airbus A320 efatra sy fiaramanidina Boeing 757-200 telo izay ampiasain'ny fampanofana amin'izao fotoana izao amin'ny telovolana faharoa. Mikasika ny fanaterana amin'ny ho avy, ny UAL dia nanemotra fiaramanidina Airbus A350 efatra tamin'ny taona 2018 ary nanafaingana ny fiaramanidina Boeing 12 MAX 737 ho lasa 2019 ary fiaramanidina roa 787-10 ao anatin'ny taona 2019. Ny orinasa koa dia nanova ny baiko 100 an'ny baiko Boeing 737 MAX ankehitriny ho Boeing 737 MAX Fiaramanidina 10 ary manantena ny hitondra ny fiaramanidina manomboka amin'ny faran'ny 2020.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny torolàlana UAL amin'ny telovolana fahatelo 2017, azafady tsidiho ny ir.united.com raha mila fanavaozana ny mpampiasa vola.
Zava-nisongadina tamin'ny volana faharoa
• Nanatanteraka ny ankamaroan'ny fanovana folo nambara tamin'ny faran'ny volana aprily mba hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny:
o Fampitomboana ny famporisihana ho an'ny mpanjifa noho ny fandavana an-tsitrapo hatramin'ny 10,000 XNUMX $.
o Nanangana ekipa vahaolana ho an'ny mpanjifa hanome vahaolana amin'ny mpamorona vahaolana toa ny fampiasana seranam-piaramanidina akaiky, seranam-piaramanidina hafa na fitaterana an-tanety hitondrana ny mpanjifa any amin'ny toerana farany alehany.
o Nihena ny habetsaky ny overbooking, ary nahita fihenan'ny 79 isan-jato amin'ny fidinana an-tsitrapo tsy fidiny amin'ny volana Mey isan-taona-taona ary ny fihenan'ny 88 isan-jato tamin'ny volana Jona isan-taona.
o Nanafoana ilay kasety mena tamin'ny kitapo very mandrakizay tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny politika “tsy misy fanontaniana” momba ny valizy very ary mandoa mpanjifa 1,500 $ ny sandan'ny kitapo sy ny atiny.
• Nohavaozina ny sidina rehetra eo anelanelan'i Boston sy San Francisco mba hanomezana tolotra kilasy fandraharahana transcontinental premium, ao anatin'izany ny seza fandriana fisaka sy ny sakafo nohatsaraina. Fanampin'izany, fampitaovana nohavaozina amin'ny serivisy kilasy transcontinental premium eo anelanelan'ny Newark / New York sy San Francisco ary Newark / New York ary Los Angeles, ao anatin'izany ny fanolorana menio vaovao sy fandriana manokana avy any Saks Fifth Avenue.
• Nanambara ny fanampiana sakafo mafana maimaim-poana sy zava-pisotro misy alikaola ho an'ny mpanjifa mandeha amin'ny Economy Plus amin'ny sidina transcontinental premium rehetra.
• Nanokatra efitrano fandraisam-bahiny Global Rection vaovao ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Los Angeles (LAX) ho ampahany amin'ny ezaka fanavaozana maherin'ny antsasa-tapitrisa dolara an'ny orinasa hamerenana sary an-tsaina ny toerana rehetra atrehan'ny mpanjifa ao LAX.
• Nandritra ny telovolana faharoa, nanao fanatsarana i United mba hanatsarana ny fahafahan'ny mpanjifa manavotra kilometatra MileagePlus.
o Fanatsarana ny fahafahan'ny mpanjifa manavotra kilometatra amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny isan'ny sidina anatiny miaraka amin'ny fisian'ny Economy Saver Award hatramin'ny 40 isan-jato ary manantena ny famandrihana Saver Award mandritra ny fahavaratra dia hitombo hatrany.
o Nampahafantarina tabilao isan'andro isan'andro ny vidin'ny mari-pahaizana isan'andro ary ny tabilao loka Saver vaovao izay mahomby amin'ny 1 Novambra.
• Nanambara ny fanatsarana ny zotra sy serivisy maro ny orinasa, anisan'izany ny:
o Serivisy iraisam-pirenena vaovao eo anelanelan'ny Newark / New York sy Buenos Aires, Arzantina, ary eo anelanelan'ny Los Angeles sy Singapore, ny sidina maharitra indrindra tsy an-kiato mankany Etazonia Etazonia na. Nanampy sidina faharoa isan'andro eo anelanelan'ny Newark / New York sy Bogota, Colombia ihany koa ny orinasa.
o Serivisy fanampiny sy fiaramanidina avo lenta eo anelanelan'ny San Francisco sy toeran-kaleha 18, ao anatin'izany ny Seattle, Philadelphia ary Portland, Oregon.
o Fampitomboana ny serivisy mankany Hawaii amin'ny làlambe 11, manolotra sidina bebe kokoa ho an'ny mpanjifa eo amin'ny tanibe sy ny Nosy Hawaii raha oharina amin'ny mpitatitra hafa.
• Nanambara ny fanatsarana ny zavatra niainan'ny mpanjifa tao amin'ny seranam-piaramanidina Intercontinental any Houston George Bush tamin'ny alàlan'ny fanolorana ireo mpanjifa fotoana fohy kokoa sy mety kokoa ary fidirana tsara kokoa amin'ny toerana itodiana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny "famerenana amin'ny laoniny" ny hub manomboka amin'ny volana oktobra.
Operations sy ny mpiasa
• Ireo mpiasa dia nahavita ny fahatanterahana tsara indrindra, fiaingana ara-potoana ary fahatanterahan'ny fahatongavan'ny tantaran'ny orinasa; vokatr'izany, United dia nanana fanafoanana vitsy noho ireo mpifaninana lehibe rehetra.
• Miitatra ny andraikitry ny mpitondra mpanatanteraka maro hanompoana bebe kokoa ny mpanjifa, hitarika ny mpiasa ary hifantoka amin'ny fahatongavana amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany.
• Nahazo tombony 28 tapitrisa dolara ny mpiasa amin'ny fahombiazan'ny asa.
Hilton, Marriott ary G6 Hospitality dia manambara ny fivoaran'ny hotely any Honduras
Crystal River Cruises dia manampy làlana vaovao amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona 2018 an'i Crystal Mahler